Spain oo ku biirtay barnaamijka Deyn Cafinta Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Bishii December 2019, IMF waxay usoo jeedisay dalalka xubnaha ka ah inay deynta ka cafiyaan Soomaaliya, si dowladda u qaadato deyn cusub oo dib loogu dhisayo kaabiyaasha dhaqaale ee wadanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Spain ayaa ku biirtay dalalka ka caawinaya Soomaaliya cafinta deymaha dibadda looga leeyahay, taasoo ah qorsho in muddo ah socodey oo DF doonayso inay ku dhameystirto barnaamijkan oo dowladihii ka horeeyay soo billaabeen.
Gollaha Wasiiradda Spain waxay ansixiyeen 4,074,536.54 yuuro oo lagu shubayo akoon gaar ah oo Soomaaliya IMF looga furay, oo lagu shubayo lacagaha dalalka Caalamka ugu deeqayaan inay isaga bixiso deynta.
Soomaaliya waxaa lagu leeyaha in ka badan $ 5bn, taasoo ahayd lacag aad u yar, oo kordhaysay 30-sano ee lasoo dhaafay ee dalka dowlad la'aanta ahaa, waxaana hadda gaartey cadad aan dowladda bixin karin, sidaas darteed ua codsatay dalalka ku leh inay ka cafiyaan.
Spain ayaa ku dhawaaqday inay damacsan tahay inay sameyso tabarucaadkan oo ka badan 4 milyan oo Yuuroo inta lagu gudajiray Madasha Iskaashiga Soomaaliya ee lagu qabtay Muqdisho 7dii December 2020.
“Spain waxay hogaamineysaa Ciidamada Badda ee Midowga Yurub ee Geeska Afrika, Howlgalka Atalanta, ee ka dhanka ah burcad badeedka taasna waxay ilaalineysaa maraakiibta Barnaamijka Cuntada Adduunka iyo AMISOM, Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraalka Spain.
Intaas waxaa sii dheer, Spain waa mid ka mid ah ka qaybgalayaasha hormoodka ka ah Howlgalka Tababbarka Midowga Yurub ee Soomaaliya, oo ujeedkeedu yahay inay tababaro milateri siiso Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, kuwaasoo lagu wado inay la wareegaan waajibaadka amniga ee dalka laga billaabo sannadka soo socda.
Deyn cafinta waa mid dib ugu laabanaysa sanadkii 2013, markii Maraykanku aqoonsaday dowladda Soomaaliya, taasoo horseeday inay IMF iyo World Bank dib usoo celiyaan xiriirka shaqo ee dalkaan dhaca Geeska Africa, ee mudada dheer dagaallada ka socdeen. Halkan ka akhriso Warbixin KON July 2020 ka qortay Deyn Cafinta.
0 Comments Topics: deyn cafinta soomaaliya